Musharixiinta isbadel doonka ah oo Xasan Sheekh kaga guuleystay dhowr qodob oo muhiim ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Musharixiinta isbadel doonka ah oo Xasan Sheekh kaga guuleystay dhowr qodob oo muhiim ah
Musharixiinta isbadel doonka ah ee u taagan tartanka doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa markii ugu horeeysay ku guuleystay qodobo muhiim ah oo ay olole u galeen, si ay wax uga bedelaan doorashada madaxweynaha.
Illaa 18 oo ka mid ah 23-ka musharixiinta ee u tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka mideysan inay ka hortgaan dib u doorashada madaxweyne Xasan Sheekh.
Musharixiintaasi ayaa ugu dambeyn cadaadis weyn ku saaray guddoonka baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinka dhowr qodob oo ay ku guuleysteen islamarkaana ay taageero uga heleen wakiilada beesha caalamka.
Qodobada ay ku guuleysteen ayaa waxaa ka mid ah:-
Inay cadaadis ku saareen guddoomiye ku xigeenkii guddiga doorashada is-casilid kadib markii uu goob fagaare ah ka taageeray dib u doorashada musharax Xasan Sheekh Maxamuud.
Waxay dib u soo celiyeen dood-wadaagii musharixiinta oo ay laaleen guddiga doorashooyinka kadib muran ka dhacay.
In ammaanka doorashada laga wareejiyo taliyeyaasha ciidamada booliska iyo nabad-sugidda xilligaan oo ay ku eedeeyeen inay xiriir toos ah la leeyihiin musharax Xasan Sheekh.
In goobta doorashada laga bedelo xarunta Jeneraal Kaahiye ee gaadiidka booliska loona raro xarunta Afisyoone.
Dhinaca kale, dadaalka ay muujiyeen musharixiintaan ayaa la dhihi karaa waa mid ay ka mideysan yihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen in markale dib loo soo doorto madaxweynaha haatan xilka haaya Xasan Sheekh Maxamuud, balse sida muuqata waxay ku guul-dareysteen inay hal musharax ku midoobaan.